Blaogera Ejiptiana Iray Misongadina Sy Mpikatroka Maromaro Hafa Voasambotra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Febroary 2019 2:02 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny May 2006)
Lahatsoratra niandohana, avy amin'i Socrates
Alaa Abd El-Fatah, iray tamin'ireo Ejiptiana mpikatroka ara-politika, ary iray tamin'ireo blaogera voalohany indrindra tao Ejipta voasambotra amin'izao fotoana izao, niaraka tamin'ireo mpikatroka maherin'ny ampolony, nandritra ny hetsika ampilaminana ho fanehoana firaisankina amin'ireo mpikatroka miisa enimpolo izay voasambotra nandritra ilay fitorevahana tsy nampiasàna herisetra, roa herinandro lasa izay, ary koa ireo olona notazonina nandritra ny roa herinandro mba hanaovana fanadihadiana mikasika “heloka bevava” izay tsy niteraka afa-tsy famazivaziana, isan'izany ny fanalana baraka ny filohampirenena, fitazonana ny “fitaovana famoahana vaovao” (graffitis) ary fanakanana ny fifamoivoizana.
Heverina fa androany no hodinihan'ny fampanoavana ny raharaha momba ilay vondrona voalohany tamin'ireo mpikatroka voasambotra, roa herinandro lasa izay, mba hahafahana mamoaka azy ireo na hanavaozana indray ny fitazonana azy ireo hanaovana fanadihadiana. Niray hina niaraka tamin'izy ireo, mpisolovava miisa 200 no nanatona hijoro ho toy ny filankevi-piarovana, mpitsara vitsivitsy sy mpikatroka maromaro izay anisan'ireo i Alaa, ary ireo mpiara-miasa aminy kosa nivory nanodidina ny lapan'ny fitsaràna.
Nolavin'ny manampahefana ny hidiran'ireo mpikatroka tao an'efitrano fitsarana, ho fanampin'ny andrana mba hanolorana fotsiny ho an'ny fampanoavana ny antontan-taratasin'ireo “voatazona”, fa tsy ireo voatazona izy tenany. Nandritra ny ora maro, nihiaka teny faneva nanohitra ny governemanta ry Alla sy ireo mpikatroka mpiaradia aminy, nihira sy naneho firaisankina amin'ireo mpikatroka namany nosamborina. Tamin'ny fiafaràn'ny hetsipanoherana, nitombo ny isan'ireo polisy nanodidina ilay vondrona, nandà tsy hamela azy ireo hiala teo ary nanomboka nitsimpona sy nisambotra an-dry zareo. Nentina tany amn'ny biraon'ny polisy teo akaiky teo ry zareo ary tsy navela hahazo mpisolovava, sy tsy azo tsidihana. Ankehitriny ireo mpisolovava dia mijoro eo ivelan'ilay birao mba hanara-maso fotsiny ny raharaha sao sanatria entina ho any an-toerankafa ireo mpikatroka, izay izany mihitsy no nitranga. Notampenana ny mason'ny telo tamin'izy ireo ary nentina ho any aminà biraon'ny polisy iray hafa ary tany no navotsotra fotoana fohy taorian'izay.
Ny famelezana farany nataon'ireo manampahefana ejiptiana dia nitondra nankany amin'ny famotehana ny fanohanan'ny vahoaka ny fitakian'ireo ejiptiana mpitsara mba hanana fahaleovantena tanteraka ny fahefam-pitsarana, izay efa ampolo taona maro no nitsabatsabahan'ny fahefana mpanatanteraka tamin'ny asany mba hikarakarana fifidianana, hisamborana ireo mpitarika ny mpanohitra ary hanasaziana ireo mampiaka-peo nanohitra nandritra ny ampolo taona maro, hamoahana fanapahankevitra momba ny lalàna an-kamehana. Notakian'ireo mpitsara ihany koa ny hanaovana fanadihadiana momba ireo fanodinkodinana nandritra ireo fifidianana natao farany teo. Mba hampanginana azy ireo, amin'ny fanarahana ireo dingana lazain'ny lalàna, ny governemanta izay soloin'ny ministeran'ny fitsarana tena, dia nandefa ny roa tamin'ireo mpitsara nitarika ilay hetsika mba hiatrika ny kaomitin'ny maha-ara-dalàna. Manana toerana misokatra ho azy ireo ny mpitsara ao anatin'ny klioban-dry zareo (sendika) efa ho herinandro maro izao, toerana izay tohanan'ny toerana iray hafa an'ireo Ejiptiana mpikatroka avy amin'ny Kifaya (ampy izay), Al Horreyya Alan (fahalalahana izao dieny izao), sy ny antoko El Ghad ho fanampin'ireo hetsika hafa sy ireo olontsotra ivelan'ny sendikan'ireo mpitsara. Nandritra ny andro telo nisesy, notafihan'ny polisy, nampian'ireo jiolahimboto, ilay fitorevahan'ireo mpikatroka nony nirotsaka ny alina, nidaroka tamin-kerisetra ireo mpanao fihetsiketsehana ry zareo ary misambotra andianà mpanao fihetsiketsehana isaky ny mihetsika. Tamin'ny alina voalohany, 24 Aprily, mpitsara iray no nodarohan'ny polisy tamin-kerisetra, lehiben'ny fitsarana, ary mpikatroka niisa 60 no nosamboriny tao anatin'ireny fanafihana ireny, isan'ireny i Malek Mostafa , Mohammed Sharkawy sy Mohammed Adel izay bilaogera mpiaramiasa. Tsy ampy taona i Mohammed Adel ka notazonina any amin'ny fonja natao ho amin'izany. Nanomboka fitokonana tsy hisakafo ilay andiany nosamborina mba hanehoany firaisankina amin'ny fitakian'ireo mpitsara sy ho hetsika fanoherana ny fitohizan'ny fitazonana azy ireo.
Alaa dia iray amin'ireo olona tena mavitrika amin'ny fanohanana ny tontolon'ny bilaogy ejiptiana. Miaraka amin'ny vadiny Manal, ny “Bit Bucket” -ndry zareo dia toerana iray fanangonana saika ireo bilaogera ejiptiana rehetra mihitsy. Azony ny loka manokana Reporters Without Borders – DW Best of Blogs award tamin'ny 2005 ary talohan'io dia nitafa tamin'ny Global Voices izy. Izy dia iray amin'ireo olona izay niantoka ny fahombiazana sy ny fipariahan'ny tontolon'ny bilaogy ejiptiana .